ईश्वर कँडेलको कविता : आऊ, हातेमालो गरौँ ! « News24 : Premium News Channel
ईश्वर कँडेलको कविता : आऊ, हातेमालो गरौँ !
सदियौंदेखि अविरल बग्दै
रुखबिरुवा र प्राणी जगतमा
निरन्तर जीवनपान गराउँदै
मूक साक्षी बसिरहेको
एउटा प्राचीन नदी हुँ म।
तिमीले देख्ने, लेख्ने र टेक्ने
सबैमा छु म कहीँ न कहीँ
तर खै के सोचेर हो कुन्नि
अब मेरो प्राचीन मार्गमा
धावा बोल्दै छौ अरे
तर नबिर्सनु कहिल्यै
म छु र तिमीहरु छौ
म हुनु भनेको तिमीहरु हुनु हो।
मेरो मार्ग बदल्न खोज्नु अगाडि
मेरो प्रवाह छेक्न खोज्नु अगाडि
मसँग जुध्नु अगाडि
फुर्सदले पढ्नू- सिन्धु र मायान सभ्यताका
जन्म र मृत्युका पानाहरु
यदि कुनै फरक परेन भने तिमीमा
आऊ र दोहन गर ममाथि
र हेर मेरो ताण्डव नृत्य
जतिबेला म मेरा दुवै किनारका
आफ्नै सभ्यताहरु चपाइरहेको हुनेछु।
आऊ, हामी हातेमालो गरौं
म तिमीहरुलाई हराभरा र सम्पन्न राख्छु
तिमीहरु मेरो मार्ग नरोक